Tsy misy fepetra, ny fampiononana amin'ny fijanonana ao amin'ny efitrano iray manokana dia miankina amin'ny hatsaran'ny fononteny. Noho izany, amin'izao fotoana izao, noho ny toetra tsy manam-paharoa, ny fitomboan'ny laza dia mahatratra io karazana famaranana io eo amin'ny tany, toy ny cork. Inona ny maha-tokana an'ity fitaovana ity? Voalohany indrindra, izany dia mazava ho azy fa ny fitiavany ny tontolo iainana. Ny Cork , toy ny fitaovana vita, dia atao amin'ny fanindriana ny hodi-kazo hazo oaka miaraka amin'ny anarana mitovy, izany hoe fitaovana voajanahary tanteraka. Ankoatr'izay, azonao atao ny mampiditra tsipiriany mahaliana toy izany, ary manantitrantitra bebe kokoa ny fahadiovana ara-tontolo iainana sy ny maha-ara-materialy azy ity - ny hazo cork dia tsy voakasika amin'ny akora simika, indrindra amin'ny herbicides.
Cork - fandrakofana tany
Ny fonony Cork dia misy amin'ny karazany anankiroa, samy hafa amin'ny fomba ametrahana azy. Ny karazany voalohany dia cork adhesive. Ny fonosana toy izany dia sora-baventy vita amin'ny cork, izay miorina eo amin'ny tany mba hodiovina. Koa satria ny haben'ny karazan-kazo toy izany dia miova ary azo alaina arakaraky ny famolavolana hevitra (raha toa ka mivaingana ny elanelan'ny loko toy izany), ny fampiasana azy dia manome fahafahana betsaka amin'ny famoronana orinasa tany am-piandohana. Karazana bozaka hafa koa ny etona mirenireny. Izy ireo dia rindrina izay tsy miorina eo amin'ny fotony, fa miara-miasa amin'ny alalan-kavoana sy ny hatsiaka, toy ny laminate panels. Tahaka ny laminasa iray , ny fonosan'ny cork floating floors dia azo ampifandraisina amin'ny fitsipika "clique-clack", izany hoe, amin'ny fanatonana ny kofehy eo amin'ny tontonana iray ao amin'ny lavaka amin'ny tontonana hafa, na amin'ny fampidirana ny fifandraisana an-tandrify. Ny karazana bozaka karazana roa dia azo asiana rakotra vita amin'ny variny na voly, izay manatsara kokoa ny fahombiazan'ny loko boribory.
Rehefa avy nandinika ny karazan-tany avy ao amin'ny cork, mety ho fanontaniana manan-danja, ny fomba hisafidianana ny loko marina eo amin'ny tany.
Mba hamaliana izany dia tokony ho fantatrao ny tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny cork rehetra, ho toy ny fitaovana farany.
Cork eo amin'ny gorodona - ny fiantraikany
Voalohany indrindra, tokony lazaina fa amin'ny fiakaran'ny vidin'ity fiokoana ity, ny fiheverana ny fahazoana ny fiompiana dia mihatra. Ity, angamba, dia iray amin'ireo fanamaivan-tena manan-danja indrindra amin'ny fampiasana korky ho an'ny orinasa anatiny - ny bozaka dia manana vidiny avo lenta. Azonao atao ihany koa ny manondro sy amin'ny fotoana toy izany, izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fampiasana ny plug:
Miaraka amin'ny tanjaka matanjaka ampy, tsy mahasakana ny handrava ny fatorana cork;
Fiarovana amin'ny tara-pahazavana tsy miankina (ilaina ny mirehitra);
Miaraka amin'ny fiantraikany maharitra eo amin'ny hery entin-tanana (ohatra, tongolobe fanosotra), dia mitoetra eo amin'ny teboka.
Saingy, ireo fahadisoana rehetra ireo dia mihoatra noho ny fandefasana karazan'aretina be dia be ao amin'ny fonon'ny cork. Ankoatra ny hoe ny cork, araka ny efa voalaza - fitaovana iray mahafinaritra amin'ny tontolo iainana, dia mbola manana bakterizidana sy antistatique. Ny fonosana toy izany dia tsy miteraka fofona sy fahamendrehana, manohitra ny vokatry ny zavatra simika sy afo ao an-tokantrano. Noho izany, ny cork, ho toy ny safidy amin'ny fametahana ny gorodona ao an-dakozia, dia azo raisina ho fitaovana tsara indrindra. Ho an'ireo toetra tsara tsara avy amin'ny cork dia toy ny hafanana hafakely sy ny fisorohana ihany koa. Ary ny zava-misy dia saika tsy azo atao ny mijanona eo amin'ny etona cork, ka mahatonga azy ho azo atao ny mametraka cork iray (sora-baventy kely fotsiny) ao amin'ny gorodona.
Kisei eo afovoany
MDF ho an'ny valindrihana
Acryl dekoratif plaster
Adhesive ho an'ny tapatapany tsy notapahina
Famafazana ny gorodona eo amin'ny balcony
Iza amin'ireo valindry no tsara kokoa ho an'ny lakozia?
Mijoro ho an'ny voninkazo eny ivelany
Karazan'ny fitaovana fanamboarana fanaka ho an'ny tora-pasika
Efitrano fonenana any amin'ny firenena
Finaritra ny plaster
Fefy vy miaraka amin'ny tanana manokana
Sakafo amin'ny okroshke
Oregano - fananana medikaly sy fampiharana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Erosion amin'ny fitondrana vohoka
Ahoana ny fomba hanangon-tsakafo tsara ao an-trano?
Ahoana ny handrahoanao cookies?
Mihamaro ny prolactine amin'ny lehilahy
Tsy misy steroidal anti-inflammatory drugs - lis
Amin'ny firy taona no manomboka manomboka "mandeha" ny saka?
Matahotra dokotera: fomba fitsaboana mahatsiravina 25
Hydrogel ho an'ny zavamaniry
Rahoviana no mamafy persily amin'ny ririnina?
Vehivavy ho an'ny fanatanjahan-tena ho an'ny ririnina
Ireo mpankafy tsy nahitam-panafana an'i Selena Gomez ny fanarenana ankehitriny
Afaka manonitra ny vola amin'ny Alakamisy madio ve aho?